namestekhabar, Author at नमस्ते खबर
शरीरका लागि स्वच्छ पानी आवश्यक छ । तर, अहिले हामीले पिउने पानी दूषित छ । हानिकारक छ । विषाक्ता छ । त्यही कारण फिल्टर गरेर, उमालेर वा विभिन्न विधिबाट शुद्धिकरण गरेर पानी पिउने गरिन्छ । काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रको हकमा त रोगको स्रोत नै भएको छ, पानी । पानीको माध्यामबाट विभिन्न महामारी फैलने गरेको छ । ट्यांकीमा जम्मा गरेर घर-घरको धारामा आउने पानी होस् वा ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानी नै, स्वच्छ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यस्तो पानीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई नाजुक बनाउँदैछ । यस्तो अवस्थामा हामीले विश्वास गरेको भनेको…
पुर्व प्रध्यायानाधिश गोपाल प्रसाद पराजुली (मिलिजुली) का खतरानक १२ फैसलाहरु १.मापदण्ड पूरा नगरेको काठमाडौ नेस्नल कलेजलाई सम्बन्धन। २. १० अर्ब भ्रस्टाचार गरेका चुडामणिा शर्मलाई अख्तियारले ३ करोड धरौटी माग गरेको थियो तर बिना धरौटी साधरण तारेखमा रिहा गर्न आदेश ३. ६सय ३१ करोड लागुऔसध कान्डमा अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति ४. जनताको मतको अनादर गरि भरतपुर १९ मा पुन निर्वाचनको फैसला। ५. धनाड्य NRN का सस्थापक उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाल सङ कर नलिन नेपाल सरकारलाई आदेश ६. Ncellको २०% सेयर मालिक निरजगोबिन्द्को मुद्दामा कर छुट दिने फैसला ७. Ncell ८०%लाभन्स कर नतिरेको मुद्दामा…
March 18, 2018 March 18, 2018 namestekhabar
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेशवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन ३ मन्त्रालय थप गर्नुभएको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भाग पु¥याउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयको संख्या थप गर्नु भएको हो । संघीय प्रशासनिक भार बढ्ने भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेको २२ दिनमै मन्त्रालयको संख्या फेरबदल भएपछि ओली सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।२५ सदस्यसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि कायम गरिएको १८ मन्त्रालयलाई बढाएर शुक्रबार २१ मन्त्रालय बनाइएको छ । काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समितिले मन्त्रालयको संख्या प्रधानमन्त्री…
। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ८० बर्ष नाघेको ज्येष्ठ नागरिकको भिडियो अभिलेख राख्ने तयारी गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरुप नगरपालिकामा बसोबास गर्ने ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमा पुगेर उनीहरुको दैनिकी तथा अनुभव समेटेर भिडियो अभिलेख राख्ने तयारी गरिएको हो । वृद्धवृद्धाको जीवनमा भएका घटना, समाजमा खेलेको भूमीकासहित महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर भिडियो अभिलेख राख्ने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । वृद्धवृद्धा नगरपालिकाका सम्पत्ति भएको तथा उनीहरुको अनुभव नयाँ पुस्ताका लागि उदाहरणीय हुने भएकाले यो अभियान सुरु गरिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर पर्शुराम नेपालले जानकारी दिए ।
जब बाजले चौरीमा खेलिरहेकी बच्चालाई उडाएर लाग्यो र लान खोजेपछि…(भिडियोमा हेर्नुहोस् )
अन्य समाचार कतारमा कार्यरत यी नेपाली ड्राइभर जस्ले गौतम बुद्धको जन्म स्थल नेपाल हो भनेर प्रचार गर्छन दोहा, कतार: नेपालमा गत फागुन १९ गते बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनी ‘गिनिज बुक वर्ड’मा नाम लेखाउन बुद्धवचन ‘धम्मपद’ वाचन एकै साथ ७५ हजार भन्दा बढी मानिसले गरेका छन् । गिनिज बुकमा नयाँ रेकर्ड राख्नको लागि प्रक्रिया जारी छ । हुन यी सब गरिरहनु पर्थेन विश्वलाई थाहा छ । युनेस्कोमा पनि उल्लेख भएको नै छ । तर, छिमेकी देश भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेको भ्रामक प्रचार गरिरहेकाले बाध्यता हो । कतारमा आफूले चलाउने ट्रकसँगै…
दोहा, कतार: नेपालमा गत फागुन १९ गते बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनी ‘गिनिज बुक वर्ड’मा नाम लेखाउन बुद्धवचन ‘धम्मपद’ वाचन एकै साथ ७५ हजार भन्दा बढी मानिसले गरेका छन् । गिनिज बुकमा नयाँ रेकर्ड राख्नको लागि प्रक्रिया जारी छ । हुन यी सब गरिरहनु पर्थेन विश्वलाई थाहा छ । युनेस्कोमा पनि उल्लेख भएको नै छ । तर, छिमेकी देश भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेको भ्रामक प्रचार गरिरहेकाले बाध्यता हो । कतारमा आफूले चलाउने ट्रकसँगै खेम चौधरी मान्छे भन्दा कम चेतना भएको पशुपंक्षीले त आफ्नो सन्ता र वासस्थानको सुरक्षा गर्छ । भने मानिस…
ट्राफिक प्रहरीले शनिबार काठमडौंका विभिन्न सडकबाट ५१ वटा सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि दुरुपयोग गरी चलाइएका सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गरेको भेटिए ठाउँको ठाउँ कब्जामा लिन शुक्रबार ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि शनिबारबाटै कारबाही अघि बढेको हो । शनिबार २० चारपाङ्ग्रे गाडी र ३१ वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जानकारी दिएको छ । अन्य समाचार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहज छैन कार्यान्वयन सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा सिँचाइ…
सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गरेपछि राजपा सरकारमा जाने तयारी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ । ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिई सांसद चौधरीलाई रिहा गरिदिने आश्वासन दिँदै राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि नै सांसद चौधरीले शुक्रबार अनशन तोडेका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूसमेतको उपस्थिति थियो । सरकारमा जाने उद्देश्य राखेर नै राजपाले ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो । राजपा नेता चौधरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित…
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो । एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो । पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ । सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहनाअनुसार…
पैसाको अभाव झेल्दै आएका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु अहिले एक लाख ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा
करिब ६ महिनादेखि लगानी गर्ने पैसाको अभाव झेल्दै आएका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु अहिले एक लाख रुपैयाँ पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न नआएपछि पूँजी आभावमा कर्जा लिन आउनेहरु रित्तो हात फर्कन बाध्य भएका छन्। बैंकमा मिलेसम्मको कर्जा प्रवाह गरेको र दैनिक ऋणको माग पनि बढ्दै जाँदा त्यस अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि बैंकहरु यस्तो अवस्थामा आएका हुन्। चुक्ता पूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ भएका र मुलुककै ठूला वाणिज्य बैक भनिएका हरुले एक लाख कर्जा दिन नसक्नु ठूलो विडम्बना…